Uncategorized Archives - Owl Myanmar News
OM | May 14, 2021
ပင်ပန်းနေအုန်းမယ် ဒါ .. မဝင်းမေတို့အိမ်ပါလားခင်ဗျာ”” ““ဟုတ်ပါတယ် . ဟုတ်ပါတယ် .. ဘာကိစ္စရှိလို့ ပါလဲ”” ““မဝင်းမေ ကျွန်တော့်ကိုသိပါတယ် .. ခဏလောက် ခေါ်ပေးပါလားဗျာ”” ““မဝင်းမေ ခရီးထွက်နေတယ်ကွဲ့”” ““ကျွန်တော်က ဦးနေစိုးသား ဇေယျာစိုးပါ။ ဒီမှာငွေကြေးစာရင်းလေးတွေရှင်းဖို့ ဖေဖေလွှတ်လိုက်တာပါ”” ဒီတော့မှ အသက်(၅၀)လောက်ရှိသော ဦးလေးကြီးသည် လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်၍ သွားရလေသည်။ ““အော်
OM | May 13, 2021
ဆန္ဒတွေပြင်းထန် “….မမအေး…..မမအေး…..” ၁၈နှစ် ၁၉နှစ်ခန့်ရှိအသားဖြူဖြူ…….လူ ရည်ချောလေးမောင်မောင် အိမ်အပေါ်ထပ်သို့ အပြေးအလွားတက်လာရင်း နွုတ်မှတကြော်ကြော်အော်ခေါ်လိုက်သည်။ “…ဟဲ့…သေနာလေး….ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အော်ကြီး ဟစ်ကျယ်လုပ်နေရတာလဲ…. …..ငမောင်…..” အခန်းတစ်ခုထဲမှ အသားညိုညိုအသက် ၂၅ နှစ်ခန့်ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်တောင့်တင်း လှပသူလေးတစ်ယောက် ထဘီရင်လျားခါ လက်မှဘီးတစ်ချောင်းကိုကိုင်ပြီး ခေါင်းဖြီးရင်းထွက်လာသည်။ အေးအေးမော်သည် မောင်မောင်နှင့်မောင်နှမဝမ်းကွဲတော်စပ်ပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။မောင်မောင်သည် တောမှနေ၍ မြို့ကျောင်းလာနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုလည်း ကိုးတန်းအောင်စာရင်းထွက်သည့်အချိန်ဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲအောင်သဖြင့် ဝမ်းသာအားရစွာ
OM | May 12, 2021
စားချင်တာမို့လားစားချင်တာမို့လား တပ်တွင်း အစည်းအဝေး စောပြီးလို့ အားနေတဲ့ တစ်ရက် ဗကမျိုးစည်သူ ပျင်းလို့ ဖေ့ဘုတ် ဖွင့်ပြီး ဟိုပွတ် ဒီပွတ် လုပ်နေတယ်။ မျိုးစည်သူ က အရာရှိငယ် လူပျိုဆောင်မှာ နေတယ်။ အရာရှိဆိုတော့ သီးသန့် အခန်း ရတယ်လေ။ တပ်ရင်းမှူး နဲ့ အခြားအရာရှိတွေ တိုင်းမှူးလမ်းကြောင်း ပါသွားလို့ မျိုးစည်သူ
တစ်ကိုယ်ရေအသာဖြေ ကျွန်မဘဝရဲ့ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်ခြင်း, ဆန္ဒတွေရဲ့ပြည့်စုံခြင်း, မှားမှန်းသိပေမယ့် ဆက်တိုးသွားခြင်နေမိခြင်း များဖြင့် ရောထွေးနေသော စိတ်အာရုံကို ဖြစ်ပေါ်သွားစေသည်မှာ လွန်ခဲ့သောဆယ့်ငါးနှစ် ခန့်ကြာသောကာလမှ စတင်ခဲ့လေသည်။ ကျွန်မဘဝရဲ့အိမ်ထောင်ရေး အထီးကျန်ဆန်လှသော ကာလများမှာ လွန်ခဲ့သော ဆယ့်ငါးရက်မှ ရှေ့သို့ရေတွက်ခဲ့လျှင် သုံးနှစ်နီးနီးခန့်ပင် ရှိလောက်ပါပြီ။အသက်အားဖြင့် သုံးဆယ့်ရှစ် နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော ကျွန်မ ” မနီနီထွန်း ” သည် လင်ရှိမယားတစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း
OM | April 7, 2021
အပြန်အလှန် (စ/ဆုံး) ကျမဟာ ကိုကို့ကို သိပ်ချစ်တယ်။ အသည်းထဲစွဲအောင်ကို ချစ်တာရှင့်..။ ကိုကိုက သိပ်ကြင်နာတတ်တာလေ။ ဒါကြောင့်လည်း ကျမက အချစ်ပိုရတာပေါ့..။ ကိုကို့ကို ကျမက အမြဲတမ်း တမ်းတနေတာ။ သတိရနေတာ..။ လွမ်းနေတာ..။ ကိုကိုနဲ့ မတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေဆို ရင် ကိုကိုနဲ့ ချစ်ကြတာတွေ ပြန်တွေးပြီး ရင်ထဲမှာ လှိုက်ဖိုလာရော..။ ကိုကိုနဲ့ ချစ်ကြတာတွေကလည်း
တရှိုက်မက်မက် ခံစား ခွေးသိုး၏လီးကြီးက မစိန်ခင်၏ ဖင်သားအိအိနှစ်ဖက်အကြားရှိ စောက်ဖုတ်အခေါင်းပေါက်ကျဉ်းကလေးထဲသို့ အဆက်မပြတ် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာနေသည်။ မစိန်ခင်တစ်ယောက် ခါးကလေးကော့ကနဲ ကော့ကနဲဖြစ်သွားပြီး သူမဖင်သားကြီးနှစ်ဖက်ကို ပင့်မြှောက်၍ ခွေးသိုးလိုးဆောင့်မှုကို ဇိမ်ယူခံစားနေသည်။ ခွေးသိုးမှာ အရပ်ပုပုပြတ်ပြတ် လူလုံးလူဖန်သေးသော်လည်း သူ့လီးကြီးကမူ သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့် မလိုက်ဖက်အောင်ပင် ကြီးမားဖွံ့ထွားကာ ရှည်လည်းရှည်လွန်းလှသည်။ သူ တစ်ချက်တစ်ချက် အားယူလိုးဆောင့်လိုက်တိုင်း မစိန်ခင်၏တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်မှာ အိကနဲ